Isu leParoli - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Roulette » Isu leParoli
Yini Okufanele Yaziwe Wonke Umdlali Ngecebo LikaParoli?
Nakhu ukuthi ungayidlala kanjani iParoli
Yiziphi izinzuzo nezingozi zohlelo lweParoli lweRoulette?
Iningi lamasu we-roulette asetshenziswe ngabadlali agxila kuma-streaks wokuwina esikhundleni sokubuyisa ukulahleka. Lokhu yikho kanye umuntu angakulindela kumasu athandwayo aseMartingale naseFibonacci asebenzela abadlali abayitoho nabangaba yingozi. Kepha kunelinye isu elithatha indlela enesibindi nejabulisayo yokuwina i-roulette- Isu leParoli.
Ngokusho kwemithombo eminingi, leli qhinga lisuselwa kumuntu oyedwa ogama lakhe lingu-‘Paroli ‘, futhi lokhu kusetshenziswe okokuqala ngesikhathi se-17 th ikhulu leminyaka. Ekuqaleni, lokhu kusetshenziswe okokuqala kumdlalo wamakhadi obizwa nge-‘Basset ‘owawudumile e-Italy. Lelisu lisuselwa kumgomo wokuthi ukulahlekelwa nokuwina kuhlale kungena njalo. Lokhu kusho ukuthi kuzoba nezikhathi lapho itafula lekhasino ‘lishisa’ elinikela kakhulu ngokuwina, futhi kwesinye isikhathi ukunqoba akuvamile, ‘kuyabanda’. Kusu leParoli, umane ubheja imali ethe xaxa lapho itafula lisenkingeni eshisayo futhi ukhawulela ukubheja lapho kubanda.
Ngenye yezindlela ezilula ukwamukela isu le-roulette futhi kudinga ukubeka imali kwezinye izindlela zokubheja ezinjenge-odd / even and red / black. Ukuqala, udinga kuqala ukukhomba isigxobo sesisekelo ofuna ukudlala ngaso. Uma uhlala ulahlekelwa etafuleni le-roulette, ukubheja kwakho okuphumelelayo kufanele kulingane nesigxobo sakho osithandayo.
Kepha uma ukwazile ukuwina lo mdlalo, isu lidinga ukuphindwa kwesigxobo sakho kuze kufike ezingeni lokuthi kuzofanele ubuyele esigxotsheni sakho sokuqala noma sesisekelo noma ngabe usemgqeni wokuwina. Lowo mzuzu lapho ubuyela emuva kubheja yakho eyisisekelo ekugcineni kuncike kokuthandwa ngumdlali.
Nasi isibonelo esiyisisekelo sokuqonda kangcono iParoli ye-roulette. Yisho ngokwesibonelo uthathe isinqumo ngeyunithi eyodwa yokubheja njengesisekelo sakho. Uma udlala lokhu kubheja futhi ulahlekile, ukubheja okulandelayo kufanele kukuphindaphinde ukubheja kokuqala (amayunithi amabili okubheja). Uma emdlalweni olandelayo uzuza futhi, uhlelo lweParoli liphakamisa ukuthi udinga ukuphinda ukubheja futhi (amayunithi ama-4 okubheja).
Esibonelweni esingenhla, unganquma kanjani ukuthi sekuyisikhathi sokuma ubuyele emuva esigxotsheni esiyisisekelo noma ngabe usawina? Uma ukuphindaphinde kabili ukubheja kwakho, leso yisikhathi esihle sokuma bese ubuyela emuva kuyunithi elilodwa lokubheja. Vele, uhlelo lweParoli luguquguquka kakhulu, futhi ungahlala ukhulisa ukubheja kwakho noma ngabe usiphindaphinde kabili isigxobo.
Ngohlelo lwe-Paroli, i-bankroll yakho ivikelwe empeleni ekuchithweni okuyingozi kokulahleka. Lapha, abadlali ngeke babeke ukubheja okungaphezu kokuphindwe kane kwesigxobo sesisekelo esithandwayo. Ngamafuphi, abadlali ngeke babeke engcupheni imali ukuze nje basike futhi babuyisele ukulahleka. Inkinga ngaleli qhinga ukuthi uma uphinda isigxobo, kunengozi yokuthi umugqa wokuwina uzophulwa. Abadlali abangalindeli ukuwina okuphezulu lapho bedlala uhlelo lweParoli lweroulette.
Isu leParoli liyindlela yokubheja edumile esetshenziswa lapho kudlalwa i-roulette
Lolu hlelo lokubheja lwaziwa njengeMartingale ehlehlisiwe, lapho abadlali bagxile ekuzuzeni imigqa esikhundleni sokujaha ukulahlekelwa
Le ndlela isuselwa kumgomo wokuthi amatafula e-roulette anezintambo ezishisayo nezibandayo. Abadlali badinga ukubheja kakhulu kumatafula ashisayo futhi bakhawulele ama-wagers kumatafula angakhokhi okuningi okwamanje
EParoli, abadlali kumele bakhombe kuqala isigxobo bese besisebenzisa ukudlala umdlalo wokuqala. Lapho abadlali behlulwa, kufanele babheje isigxobo esiyisisekelo futhi lapho bephumelela, isigxobo sokugcina kufanele siphindwe kabili